Jwxo-shiil: Kam Shuufnaa Maraakiib Macadalahi Huudhi – Rasaasa News
Jwxo-shiil: Kam Shuufnaa Maraakiib Macadalahi Huudhi
May 3, 2010 Jwxo-shiil, Maadey
Maadeey oo ban joogoobay kolkii uu sabtigii qol ku xidhay Jwxo-shiil, oo ay dhinacyada ka fadhiyaan dad raaskiisa ah, kuna yidhi waxba ma tihid Maadeeyow gudana galimaysid geesinimona ma haysid, waxa aad guddid iyo waxa aad gashana waan aqaan.
Jwxo-shiil, oo ay ushu meel uga go,an tahay, ka dib kolkii ay beeshiisu talo ku goysay in Itobiya la garab galo. Hadaba shalay oo sabti ahayd ayuu Jwxo-shiil gurigiisa ugu yeedhay Maadey, oo uu ka maqan yahay gadhwadeenkiisii Macalin Diirane. Waxaana loo sheegay in wixii hada ka dambeeya uu la socdo in uusan carabka ku adkaynin Itobiya, hadiiba la waraysto maadaama uu heshiis noo socdo.
Maadeey ayaa kolkuu maqlay erayada uu Jwxo-shiil, yidhi ka naxay oo yidhi Aar Lee, Itobiya maa loo galaa, Jabhad ma haynoo, anigu kulama qabo. Jwxo-shiil, baa yidhi arinka way ogg yihiin labada nin ee aniga igu xiga Ina-dhuubo iyo Mr Qaaxo, Cabdulahi Mukhtaara isaga ayaaba Buufis hayaa oo ay haweenaydii guriga ka caydhisay, Macalinkana adiga ayaa u sheegi, hadal dambe looma baahna ee orod hoyo afkaagana hayso.
Shalay waxay ahayd Sabti, habeenimada Axada waa habeenka loogu qaad cun badan yahay London. Maadeey oo ay ka jajaban tahay ayaa ka tagay guriga Jwxo-shiil, oo sii maray marfash dariskiisa ah oo uu macmiil ka yahay kana qaatay dhawr marduuf oo dayn ah, dabadeedna tagay guriga Mustafe Farax. Kolkii uu ka tuuray hal marduuf kuna uu furtay, ayuu jeebka kala soo baxay kaadh telefoon [phone card], kolkaas ayuu cidida ku xoqday, wuxuu la hadlay Macalin Diirane oo uu u sheegay wax uu Jwxo-shiil yidhi, Macalinka ayaa calool adkaysiiyey oo yidhi ma dhici karto, maalin walba ma war hor leh ayuu noo keeni.
Maadey, ayaa mar labaad waxaa uu la hadlay, qaar ka mid ah xubnaha is-haysta ee Qolka Kaniisada Jaaliyada una sheegay waxa jira iyo wax ay isaga iyo Macalin Diirane is yidhaahdeen.
Hadalkii xan noqoy, waxayna isticmaaleen naanaysta Jwxo-shiil, iyaga oo leh ninkani wuu kharibay halgankii iyo ummadii, wuuna iska horkeenay dadkii u dhashay gabalka.
Maadeey, anigu hada ma sallaamo dadkii aan ehelka ahayn, Dr. Dolal, in uu dilayna hada ayey ii cadaatay. Waxaana waajib ah in uu anigana i dilo, waleena kama yeelayo in uu Itobiya kula heshiiyo ganacsi, uu u furo mustafe iyo beeshiisa.
Jwxo-shiil, ayaa maqlay maalintii Axada ahayd in uu baahay warkii uu Maadey u sheegay waxaana uu siiyey digniintii ugu dambaysay. Isaga oo ku yidhi “kuwo kaa raganimo badan ayaan daadka raaciyey macadalahi adiga oo Maadeey ah.”
“Dad-qalatadii Qarsoonayd” ee Dadweynaha Somalida Ogadeeniya Habeenkii Dariiqyada u Galaysay oo la Ogaaday